Aaminnimo CEO Si Maldahan U waxyaabaha crypto
CEO aaminnimo Investments Abiigayil Johnson ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda ayaa ka shaqaynaysa tiro ka mid ah cryptocurrency iyo blockchain la xiriira badeecada iyo qurbaanno, la sii daayo fikirayo go'an waayo mararka qaar ka hor dhamaadka sanadka. CEO ayaa yiri "Wax yar Waxaan heysanaa socda, Wax yar in ay yihiin qayb ahaan samayn, laakiin sidoo kale nooca on shelf ah, sababtoo ah ma ahan runtii waqtiga saxda ah. Waxaan rajaynaynaa in ay leeyihiin qaar ka mid ah wax in uu ku dhawaaqo dhamaadka sanadka. "
Aaminnimo ayaa waxay si joogto mid ka mid ah shirkadaha waaweyn yar in si joogta ah uu leeyahay oo si cad u ishaaray ay xiisaha crypto, iyo CEO ku tageen in la qeexo "Waxa aan bilaabay in la dhisayay liis dheer oo xaaladaha isticmaalka labada Seeraar, Ethereum, cryptocurrencies kale, ama technology kara kaliya cayriin blockchain. Inta badan oo iyaga ka mid ah ayaa lagu burburinayo by hadda ama ugu yaraan saaray khaanadaha. wixii dhab ahaan ka badbaaday ma ahaayeen waxyaalihii Waxaan u malaynayaa in ay daruuri tahay waxaan filayaa. Waxaan isku dayayeen inay dhegaystaan ​​suuqa iyo rajayn waxa dareen ka dhigi lahaa. "
UK Maaliyadda: “Crypto-hantida” waxay u baahan yihiin xeerka
Seeraar iyo lacagaha kale ee digital waa a “xaaladda Wild West” oo u baahan in la nidaamiyo si loo ilaaliyo maal-, guddi ka mid ah Xildhibaanada ayaa ugu baaqay. Dhibaatooyinka waxa ka mid ah qiimaha kacsan, ilaalinta macaamiisha yar iyo halista jabsiga iyo lacagta la dhaqay-, ayaa sheegay in Guddiga Maaliyadda. Guddiga ayaa sheegay in ay jiraan no cryptocurrencies si fiican u shaqeeya oo doorbiday inuu iyaga ugu yeedho “crypto-hantida”. Waxaa ugu baaqay Hay'adda magaalada, Maamulka Conduct Financial, si ay u kormeeraan.
Waqtigan xaadirka ah, FCA ah ma laha awood ay ku sharciyaynayso mid ah kuwa soo saara hantida ama is-weydaarsiga ah oo ku saabsan taas oo ay kaga baayacmushtari. “maal-Crypto-hantida ayaa hadda awoodi karaan ilaalinta aad u yar ka soo taxaya ee khatarta. kuwaas oo, ma jiraan habab rasmi ah xal-macaamilka, mana magdhow.” ayaa sheegay in Guddiga Maaliyadda. Nicky Morgan, oo guddoomiya guddiga, ayaa sheegay in: “Waa karin ee dowladda iyo nidaamiyo si bumble weheliyaan soo saaray digniino taag gabeen, in maalgashiga, weli ka fogaadaan jilitaanka. Ugu yaraan, Xeerarkii waa in wax laga qabto ilaalinta macaamiisha iyo la dagaallanka lacagta la dhaqay-.”
Nasdaq waxaa isuna crypto saaxiibtinimo Swedish fintech Cinnober
Nasdaq, lagu kala gato saamiyada labaad ee ugu weyn dunida ee, ku dhawaaqday in ay tahay in shuqullada si ay u bartaan Cinnober, bixiyaha xal ganacsi oo ku salaysan in Sweden. Cinnober leedahay taariikh ah bullishness xagga hantida digital iyo taas oo kuu sahlaysa hay'adaha in ay maal iyaga oo ku. Mid ka mid ah dadaalka kuwa waa iskaashi la BitGo, jeerta ah fasalka hay'adaha ammaanka xabsiga cryptocurrency.
warbixinta kooban ee afku ugu dambeeyay Nasdaq ee, inkasta oo si dadban ay dhacdo in this, dhadhan for ganacsiga cryptocurrency. Cinnober, halka aan sarrifka oo iskeed, waa bixiyaha xal ganacsiga ah in suuqa iyo clearinghouses. Tusaale ahaan, BitGo madal si fiican u-aduu maal hay'adaha waaweyn ee Nasdaq. ammaanka iyo xabsiga xal multi-Saxiixa la BitGo ayaa waxa ay ka dhigtay mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee bannaan ee. adeegga haye cryptocurrency Cinnober ayaa waxay noqon kartaa mid ka mid ah hubka ugu heel ee afku, sida walaac masuuliyada ka dhigay maal badan hay'adaha ka gaabsadaan.
Report Kraken Daily Market for 18.09.2018
$126M baayacmushtari jireen dhamaan suuqyada maanta
Facebook, Twitter, telegraam, B ...
Seeraar News - Panic, Coinbase...
Seeraar & Cryptocurrency N...
Post Previous:Blockchain News 18.09.2018
Stephan Sconyers ayaa sheegay in: